Aịzaya 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ gbasara ubi vaịn Jehova (1-7)
Ihe ndị ga-eme ubi vaịn Jehova (8-24)
Chineke wesara ndị ya iwe (25-30)
5 Biko, ka m bụọrọ onye m hụrụ n’anya abụ. Ọ bụ abụ banyere onye m hụrụ n’anya na ubi vaịn ya.+ Onye m hụrụ n’anya nwere ubi vaịn n’akụkụ ugwu na-eme nri. 2 Ọ kọrọ ala, wepụchaakwa nkume dị na ya. Ọ kụrụ ezigbo mkpụrụ vaịn uhie n’ala ahụ,Rụọ ụlọ nche n’etiti ya,Gwuokwa ebe a na-azọchapụta mmanya na ya.+ Ọ tụwaziri anya ka ọ mịa ezi mkpụrụ vaịn,Ma ọ mịrị naanị mkpụrụ vaịn ọhịa.+ 3 “Ugbu a, ndị bi na Jeruselem na ndị Juda,Biko, kpeerenụ mụ na ubi vaịn m ikpe.+ 4 Olee ihe m kwesịrị ime n’ubi vaịn mNke m na-emebeghị?+ Gịnị mere m ji na-atụ anya ka ọ mịa ezigbo mkpụrụ vaịn,Ya amịa mkpụrụ vaịn ọhịa? 5 Ugbu a, biko ka m gwa unuIhe m ga-eme ubi vaịn m: M ga-efopụsị osisi ndị m ji gbaa ya ogige,Gbaakwa ha ọkụ.+ M ga-akwatu mgbidi ya m ji nkume rụọ. A ga-azọkwa ya ụkwụ. 6 M ga-eme ka ọ dị ka ala na-abaghị uru.+ A gaghị akwacha alaka vaịn ya akwacha. A gaghịkwa abọ ubi ahụ ahịhịa. Ogwu na ahịhịa ga-epuchi na ya.+ M ga-agwakwa ígwé ojii ka ọ ghara ikwe ka mmiri zoo na ya.+ 7 N’ihi na ndị Izrel bụ ubi vaịn Jehova nke ụsụụ ndị agha.+ Ndị Juda bụkwa ubi na-eme ya obi ụtọ. Ọ nọ na-atụ anya ka ndị mmadụ na-ekpe ikpe ziri ezi,+Ma, ha nọ na-ekpe ikpe na-ezighị ezi. Ọ nọkwa na-atụ anya ka ndị mmadụ na-eme ezi omume,Ma, ọ nọ na-anụ ákwá ndị a na-echi ọnụ n’ala.”+ 8 Unu ga-ata ahụhụ, unu ndị na-enwetakwu ụlọ gbakwụnye na nke unu nwere enwe+Nakwa unu ndị na-enwetakwu ubi gbakwụnye na nke unu nwere enwe.+ Unu na-enwetagide ihe ndị a ruo mgbe a na-enweghị onye ọzọ nwerenụ,Naanị unu ebirizie n’obodo. 9 M nụrụ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha ṅụrụ iyiNa n’agbanyeghị na ọtụtụ ụlọ buru ibu, maakwa mma,A ga-ala ha n’iyi. E nweghịkwa onye ga-ebi na ha.+ 10 Nnukwu ubi vaịn dị eka iri ga-emepụta naanị ihe ga-eju otu bat.* Mkpụrụ juru otu homa* ga-amịta naanị otu efa.*+ 11 Ndị na-ebili n’isi ụtụtụ ka ha ṅụọ mmanya na-egbu egbu ga-ata ahụhụ.+ Ha na-aṅụgide mmanya chi ejie, mmanya ana-egbukwa ha. 12 Mgbe ọ bụla ha na-eme oriri,Une, ụbọ akwara, ịgbà, ọjà, na mmanya na-adị na ya. Ma, ha anaghị echebara ihe Jehova na-eme echiche. Ha anaghịkwa ahụ ihe o ji aka ya rụọ. 13 N’ihi ya, a ga-adọrọ ndị m n’aghaMaka na ha amaghị m.+ Agụụ ga-agụgbu ndị ha na-akwanyere ùgwù.+ Akpịrị ga-akpọkwa ndị nkịtị nkụ. 14 N’ihi ya, ili* asaala mbara n’onwe ya. O megheekwala ọnụ ya ka ọ ghara inwe nsọtụ.+ Ndị a ma ama n’obodo a na ìgwè ndị na-eme mkpọtụ na ya, nakwa ndị nọ na ya na-eme mkpọtụ mgbe ha na-eri oriri,Ga-abanyecha n’ime ya. 15 A ga-eweda mmadụ ala. A ga-emenye mmadụ ihere. A ga-ewedakwa ndị dị mpako ala. 16 Ikpe ziri ezi Jehova nke ụsụụ ndị agha na-ekpe ga-eme ka e too ya. Ezi Chineke, bụ́ Onye Nsọ,+ ga-eji ezi omume ọ na-eme gosi na ọ dị nsọ.+ 17 Ụmụ atụrụ ga-atakwa ahịhịa ebe ahụ ka à ga-asị na ọ bụ ebe anụmanụ na-ata ahịhịa. Ndị mbịarambịa ga-eri ihe n’ebe dị iche iche tọgbọ chakoo anụ ndị ahụ́ dị mma na-anọbu. 18 Ndị na-aghọ aghụghọ ga-ata ahụhụ. E kegidere ihe ọjọọ ha na-eme na mmehie ha na-eme n’ahụ́ ha. Ha dị ka anụmanụ nke na-adọkpụgharị ụgbọala e kegidere n’ahụ́ ya. 19 E nwere ndị na-asị: “Ya rụọ ọrụ ya ngwa ngwa. Ya bịa ọsọ ọsọ, ka anyị hụ ya. Ka ihe Onye Nsọ Izrel zubere* mee,Ka anyị mara na o meela.”+ 20 Ndị na-asị na ihe ọma bụ ihe ọjọọ nakwa na ihe ọjọọ bụ ihe ọma ga-ata ahụhụ,+Ha na ndị na-eji ọchịchịrị mere ìhè, jiri ìhè mere ọchịchịrị,Nakwa ndị na-ewere ihe na-elu ilu ka ihe na-atọ ụtọ, werekwa ihe na-atọ ụtọ ka ihe na-elu ilu. 21 Ndị ma ihe n’anya onwe haNa ndị nwere uche n’anya onwe ha ga-ata ahụhụ.+ 22 Ndị e ji ịṅụ mmanya maraNakwa ndị bụ́ aka ochie n’ịgwa mmanya na-egbu egbu ga-ata ahụhụ.+ 23 Ndị ọ na-abụ, ha nara aka azụ, ha asị na aka onye ajọ omume dị ọcha+Nakwa ndị na-ekpe onye ezi omume ikpe arụrụala ga-ata ahụhụ.+ 24 N’ihi ya, a ga-ala ha n’iyi otú ahụ ọkụ si erepịa ahịhịa ọka,Otú ahụ ọkụ sikwa erepịa ahịhịa kpọrọ nkụ. Mgbọrọgwụ ha ga-erekasịkwa. Ifuru ha ga-efesasị ka ntụ,N’ihi na ha jụrụ iwu* Jehova nke ụsụụ ndị agha. Ha ledakwara okwu Onye Nsọ Izrel anya.+ 25 Ọ bụ ya mere Jehova ji ewere ndị ya ezigbo iwe. Ọ ga-ewelitekwa aka ya taa ha ahụhụ.+ Ugwu dị iche iche ga-ama jijiji. Ozu ha ga-adị ka ihe e kpofuru ekpofu n’okporo ámá dị iche iche.+ N’ihi isi ha na-enupụ, iwe ya adajụbeghị. Kama, ọ ka welitere aka ka ọ taa ha ahụhụ. 26 O dowela ihe mba dị ebe dị anya ga-ahụ gbakọọ.+ Ọ fụọlara ha opi ka ha si n’ebe ụwa sọtụrụ bịa.+ Ha jikwa oké ọsọ na-abịa.+ 27 O nweghị onye n’ime ha ike gwụrụ ma ọ bụ onye na-ada ada. O nweghị onye na-ero ụra ma ọ bụ onye na-ehi ụra. Ájị̀ ha kere n’úkwù atọpụghị. Eriri akpụkpọ ụkwụ ha adọbighịkwa. 28 A pịrị akụ́ ha niile apị,Kweekwa ụta ha niile ekwe.* Ụkwụ ịnyịnya ha dị ka nkume siri ike. Ụkwụ ụgbọala ha na-efekwa ọsọ ka oké ifufe.+ 29 Otú ha si agbọ ụja yiri nke ọdụm. Ha na-agbọkwa ụja ka nwa ọdụm.+ Ha baa mba, ha anwụde anụ ha ga-eri,Buru ya pụọ. E nweghịkwa onye ga-anapụta ha ya. 30 Ha ga na-aba mba n’ụbọchị ha nwụdere anụ ahụ,Mba ha ga-adị ka ebe oké osimiri na-eme mkpọtụ.+ Onye ọ bụla lere ala a anya ga-ahụ na e nwere ọchịchịrị na nsogbu. Ìhè ga-aghọdị ọchịchịrị n’ihi ígwé ojii.+
^ Bat bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Gụọ B14.
^ Homa bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Gụọ B14.
^ Efa bụ ihe e ji atụ̀ ihe. Gụọ B14.
^ Ma ọ bụ “kpebiri.”
^ Ma ọ bụ “Ha dịkwa njikere ịgba ụta ha.”